Manchester United ayaa ku fashilantay dalab gaadhaya £ 91.3million oo ay ka gudbisay weeraryahanka kooxda Borussia Dortmund Jadon Sancho.
Sida laga soo xigtay Sky Sports, United ayaa diiday inay ka quusato baacsiga ay ugu jirtay ciyaaryahanka heerka caalami ee dalka England, oo 20 jir ah, laakiin weli ma aysan aqbalin kooxda Bundesliga ka dhisani dalabka United.
Inkastoo Sancho uusan umuuqan inuu kusii jeedo Manchester, hadana majaladda AS ee kasoo baxda Spain ayaa sheegeysa in Luka Jovic uu kusii jeedo Old Trafford.
Jovic, oo 22 jir ah, ayaa u muuqda mid dheeraad ku ah shaxda Real Madrid xilli ciyaareedkan, tababaraha United Ole Gunnar Solskjaer ayaana doonaya inuu amaah ku qaato weeraryahankan.
Laakiin Solskjaer ayaa loolan adag kala kulmaya seddexda kooxood ee Serie A ka dhisan ee Roma, Inter Milan iyo AC Milan oo doonaya saxiixa laacibka reer Serbia.
Leeds ayaa ku sii dhawaaneysa heshiiska ciyaaryahanka khadka dhexe ee Bayern Munich Michael Cuisance.
Sky ayaa rumeysan in ciyaaryahanka reer France, oo 21 jir ah, uu qarka u saaran yahay inuu noqdo saxiixii sideedaad ee xagaagan, waxaana laga yaabaa inuu maro tijaabada caafimaadka 24-ka saac ee soo socota.
West Ham ayaa 20 milyan oo ginni ugu dhaqaaqday daafaca dhexe ee kooxda Fiorentina Nikola Milenkovic.
Daily Mail ayaa ku waramaysa in laacibkan heerka caalami ee reer Serbia, oo 22 jir ah, uu noqday bartilmaameedka ugu dambeeyay ee kooxda Hammers kadib dalabyadii fashilmay ee laacibka Burnley James Tarkowski iyo laacibka St-Etienne’s Wesley Fofana oo isna qarka u saaran inuu ku biiro Leicester.
Tababare David Moyes ayaa sidoo kale isha ku haya inuu lasoo saxiixdo daafac midig ka dib markii Ryan Fredericks uu dhaawac ka soo gaadhay muruqa bawdada kulankii Axadii ay 4-0 kaga badiyeen Wolves.
Laacibka Slavia Prague Vladimir Coufal ayaa diirada u saaran laakiin waxaa la arki doonaa hadii dalab 4 milyan euro ah oo la sheegay inuu ku filnaan doono inuu sugo 28 jirkaan Czech Republic u dhashay.
Dhanka kale, Rangers ayaa lagu wadaa inay u sheegaan Hammers inay iska iloobaan la wareegista James Tavernier.
Daily Record ayaa sheegaysa in kabtanka kooxda Gers uu yahay daafac kale oo Moyes uu xiiseynayay inuu soo iibsado ka hor inta uusan suuqa kala iibsigu xidhmin Isniintii.
Laakiin daafacan gooldhaliyaha ah ayaa ku faraxsan Ibrox, isagoo tababare Steven Gerrardna aanu doonayn inuu iibiyo.
Previous PostMadaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland oo Soo Xidhay Shirweynaha Afraad ee Xisbiga KULMIYE Next PostSacuudiga oo ku dhawaaqay tallaabooyin cusub oo loogu talo galay gudashada Cumrada